Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: Hoygaaga Kadugso Dhaxanta & Qabowgaba By C/lahi C/ Ibraahim.
Maqaal: Hoygaaga Kadugso Dhaxanta & Qabowgaba By C/lahi C/ Ibraahim.
Sahal ma aha Balan burintu!
Maah-maah da’wayn ayaa ahayd: “Aduun waxaa laga waraystaa Nin kaa wayn, Aakhirana waxaa lagala sheekaystaa Nin kaa Cilmi badan”
Xikmaduhu da’day doonaan ha jiraan macnihii ku Duugnaa iyo waayihii ay xanbaarsanayd waa iyagii uun isma badalaan.
Dhinaca waxa lagu tilmaamo Cahdi baal Maristu, Ama wax la Isku ogaa cid gees Marta oo ku liibaantay lama xusin, xataa haday dhacdana ma sii waaraan.
Nin kula tashadayna lama daba maro, waa Aragti ay la soo falgaleen hogaamiyayaal dad soo maamulay ay gaashaan ka soo dhigatay mudooyin ay Noolaayeen uugu danbayna Waxay dhaxal-siisay Natiijooyin ay usoo Aayeen kadib markay masalooyin kala duwan ay soo tijaabiyeen.
Talada qofka kula talinaya markayna maangal ahayn yeelisteedu maankaaga ma Dagi karto marna, tusaale hadii daad mareen bulsho seexiso xiliyo roobab da’ayaan haday ka aqbalaan way wada khaldanyihiin, wixii ka yimaada masuuliyadeeda yaa loo raaci?!
Xaqiiq-dii Ninka Sargaalka ah markuu askartiisa hab xikmadaysan uu la dhaqmo,Wuu ka Maamul wanaagsan yahay kan amarada ad-adag bixinaya!
Tusaale ahaan kan farsamada xikmadaysan la darsay arimihiisa hadal wuxuu uugu soo koobi bal waxaad ka qaban kartid iskuday markan.
Hayaanka Noloshu iyadoo jaranjarooyin tahay inta Jidka aan jaro lahayn uu San hadhayn Goobta, shaxda sii wadisteedu waa mid haboon.
Markayna taasi suurtagal ahayna tabaha iyo xeeladaha habdhaqanka nololeed waa kuwo wadooyin yeelan kara.
Xaajo Nin aan Ogayn indhuhuu ka ridaa!
Goobta lagu garamay nimaan goob-joog ka ahayn ka hadalkeedu waa Masalo aan loo baahnayn.
Nin aan soo halgamin waxaa adag inuuna waxbadan ka garankeeda ay ku adkaan karto, Ama uu Dano kale fuliba isleeyahay.
Hubaal biyaha xareedintoodu waa in si dhaw looga warhayaa, markaan u kuurgalayno habka ku haboon wakhti Xaadirkan kala guurka ah.
Heshiiskii Nifaasha ee 2005 ku dhex-maray SPLM iyo Sudan, Waxaa ka mid ahaa qodobadii lagu heshiiyay in Ciidamadii Jabhada lagu daro Xoogii Ciidamadii Khartoum. Iyadoo taasi la xeerinayno Sidii ayaa lagu dhaqan galiyay.
Itoobiya 27kii sano ee la soo dhaafay waxaa soo maamulayay jabhadii dhiig-yacabka ahayd ee tplf, hadana iyadoo isbadal jiro hadana Waxay wali wadaan qas habab kala duwan ay adeegsanayaan islamarkaasina isbadalka jira ay ku minja-xaabinayaan karaankooda, taasi waa Qodob mudan ka warhayntiisu maadaama ay heerar badan oo kala duwan wali ka hawlgalaan! inagoo amuurahaas maanka ku hayna talaabo kasta oo hanaanka Diplomaasiyadeed aan ku xoojinayno waa masuuliyad ina Saaran.
Markan waxaan ku hanwaynahay Idam Alle inaan xaqiijino bartilmaameed-keena aan higsanayno. Waxaan markasta garab-siinaynaa Hamiga iyo higsiga JWXO ay ku doonayso in bulshadeenu dhaxasho Idam Alle Guushuna waa garabkeena markasta.
Cabdullaahi Cabdi Ibraahim. Wariye madax banaan.